सिसिलीमा किनमेल | Absolut यात्रा
मारुउजेन | | मा अद्यावधिक गरियो 18/06/2021 00:15 | इटाली
यदि यो बाहिर आयो सिसिलीमा किनमेल गर्दै, सवारीको आनन्द लिन तयार हुनुहोस् र घर लैजानुहोस्, तपाईं वा तपाईंको लागि, अविस्मरणीय उपहारहरू। यस्तो किसिमका सम्झनाहरू जुन हामीलाई हेर्नुहोस्, सुँघ्न वा स्वाद लिनुहोस् तिनीहरूले हामीलाई तुरून्तै इटालेली भूमिहरूमा यात्रामा लैजान्छन्।
हामी सिसिलीमा के किन्न सक्छौं? धेरै चीजहरू, केहि धेरै टुरिस्टी र अरू केहीको लागि। आज हाम्रो लेखमा तपाईले पत्ता लगाउनु हुन्छ कि के हो सबै भन्दा राम्रो सम्झनाहरु र सबै भन्दा राम्रो स्मृति चिन्ह जुन तपाईं यस आकर्षक र टुरिस्टिक इटालेली टापुबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ।
1 कहाँ सिसिली मा किन्न
2 सिसिलीमा के किन्ने
कहाँ सिसिली मा किन्न
सर्वप्रथम पहिलो चीज: तपाईले धेरै पर्यटक पसलहरू र धेरै स्मारिकाहरू विशेष रूपमा पर्यटकहरूको लागि उत्पादन पाउनुहुनेछ। तपाईं तिनीहरूलाई खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, तर यदि तपाईं तिनीहरू मध्ये एक जो केहि थप विशेष चाहान्नुहुन्छ वा सधैं हाम्रो घरको लागि पर्खनेहरूका लागि सबै भन्दा राम्रो उपहार मनमा राख्नुहुन्छ भने, तपाई सार्नु पर्छ अझै अलि कति।
अवश्य पनि, यो तपाइँसँग यात्रा कत्तिको संगठित गरिएको छ वा यदि तपाइँ तपाइँको आफ्नै वा समूहमा वा यात्रामा यात्रा गर्नुहुन्छ भने भर पर्दछ। तर जहाँसम्म सम्भव भएसम्म तपाईले गर्नु पर्छ पर्यटक ट्र्याकबाट तल झर्नुहोस् सबै भन्दा राम्रो फेला पार्न। अब, हामी कहाँ शपिंग सुरु गर्न सक्छौं? यसलाई विश्वास गर या नगर, सुपरमार्केट र छुट स्टोरहरूमा।
यो सहि छ, सुपरमार्केट चेन भएता पनि त्यहाँ धेरै छन् स्थानीय उत्पादन र, उदाहरणका लागि, प्रमुख उत्पादकहरूबाट उत्कृष्ट वाइन। त्यहाँ एक राम्रो छ चौबाटोको पालेर्मोको बीचमा जसले धेरै राम्रो मदिरा बिक्री गर्दछ र साथै विशिष्ट सजावट वस्तुहरू। खुल्ला Lidl, त्रपानी, उही। के तपाईलाई पिस्ता क्रीम मन पर्छ? त्यसैले Lidl को महान छ र यो एक राम्रो मूल्य हो।
सुपरमार्केट वा महत्त्वपूर्ण भण्डारहरू पछाडि तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ फीड, the साधारण र सानो गोदामहरू जहाँ तपाईं शौचालय कागजबाट धुलाई पाउडरमा केहि पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यसको पछाडि, सत्य त्यो हो केही स्थानीय कारीगरहरूले आफ्नो सामान यहाँ राख्छन् र ठूला स्टोरहरूमा होइन। म सॉसेज, सस, जामको बारेमा कुरा गर्दैछु।
अर्को राम्रो ठाउँ किनमेल गर्नु हो बजार वा स्थानीय बजार। सिराकुजमा एउटा महान, धेरै सिसिलियन हो। पनीम, नट र मसला जस्तै पल, माछा वा शेलफिश को खरीद गर्न को लागी धेरै। सस्तो लुगा पनि बेचिन्छ। को बजारहरू, उस्तै।
त्यहाँ सबै ठूला शहरहरूमा बजारहरू छन् र केहि हरेक दिन खुला छन् र हप्तामा एक पटक। सानो शहरहरूमा बजारहरू सामान्यतया हप्तामा एक वा दुई पटक व्यवस्थित हुन्छन्। जान्नको लागि जब तपाइँ केवल टुरिस्ट अफिसमा जानुहोस् र सोध्नु पर्छ।
को वाइनरी अर्को विकल्प वा उस्तै हो, वाइनरी तपाईं दाखबारीको टुर लिन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ बोतलहरू किन्न सक्नुहुन्छ, जो पक्कै वाइनरीमा भन्दा सस्तो हुनेछ। थप रूपमा, वाइनरीहरूमा उनीहरूले तपाईंलाई वाइनको बारेमा राम्रो सिकाउँदछन् र बोतल कति सुन्दर छ त्यसको कारण तपाईंले किन्नुपर्दैन। तर यदि तपाईं यी पदयात्रा गर्न सक्नुहुन्न भने साना, गैर-पर्यटक पसलहरूमा खरीद गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सुपरमार्केट पनि भ्रमण गर्नुहोस्, हामीले माथि भनेझैं।
सिसिलीमा के किन्ने
एक राम्रो स्मारिका र पनि धेरै उपयोगी, एक खरीद गर्न किनमेल टोकरी, हस्तनिर्मित, प्रसिद्ध र सुन्दर कफहरु. तिनीहरू धेरै र colors्ग र पोम्पमहरू, दर्पणहरू र यस्तै प्रकारका सजावटका छन्, र त्यहाँ थुप्रै शैलीहरू छन्। अर्को सम्भावित खरीद हो लाभा पत्थर उत्पादनहरू।
याद गर्नुहोस् कि सिसिलीमा दुई सक्रिय ज्वालामुखीहरू छन्, माउन्ट एटना जुन क्याटानिया शहर नजिकै छ र सानो स्ट्रोम्बोलीमा। सत्य यो हो कि सिसिलीका धेरै सडकहरू ठूला ज्वालामुखी ढु stones्गाले प्रशस्त छन् र त्यहाँ केही अन्य भवनहरू पनि छन्, जसमा इँटाको आकारको ज्वालामुखी ढु stone्गा प्रयोग भएको छ। यसैले, त्यहाँ यस खरानी ढु stone्गाले बनेको धेरै उत्पादनहरू छन् ब्रेसलेट, सजावटी कचौरा, भाँडा ...
तिमीलाई कोरल मन पर्छ? यहाँ पनि उपलब्ध छ कोरल वस्तुहरू: झुम्का र हारबाट, सरल वा विस्तृत, सजावटी वस्तुहरूमा। कोरलको रंग अलि गुलाबी वा धेरै रातो छ, र यदि तपाईं उत्तम खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले तिनीहरूलाई ट्रपनीमा फेला पार्नुहुनेछ।
La Caltagirone सिरेमिक राम्रो छ। Caltagirone आठ गाँउहरु मध्ये एक हो युनेस्को द्वारा संरक्षित, Val de Noto मा। धेरै बारोक र एकै समयमा धेरै सिसिली, र माटोको भाँडो अत्यन्तै राम्रो छ: कचौरा, चश्मा, प्लेटहरू, कलशहरू, ट्रेहरू ...
तपाईलाई मन पर्छ कठपुतलीहरु? सिसिली कठपुतली थिएटर प्रख्यात छ, ओपेरा देई पुपी १ th औं शताब्दीदेखि सञ्चालनमा छन् र अद्भुत छ। दुबै क्याटानिया र पालेर्मोको यस क्षेत्रमा ठूलो र बलियो परम्परा छ। को क्याटेनिया कठपुतली ती पालेर्मोमा भन्दा ठूला छन्, तर दुबै शहरहरूमा तपाईलाई धेरै रोचक प्रस्तावको साथ धेरै स्टोरहरू भेट्नेछन्। त्यहाँ धेरै छ हस्तशिल्प कठपुतली सुन्दर र त्यहाँ धेरै मूल्यहरु छन्।
यदि तपाईं टोपी लगाउने हो भने, अब टेनिning कम र कम फैशनेबल छ, तपाईं एक किन्न सक्नुहुन्छ ठेठ कोपोला टोपी। यदि यो सँधै माफियासँग सम्बन्धित छ भने, आज कथा फरक छ र त्यहाँ धेरै युवा व्यक्तिहरू छन् जसले यो हास्यास्पद टोपी रोजेका थिए। nonno, हजुरबुबा। तिनीहरू पलेर्मोमा हातले बनाएको टोपीको रूपमा जन्मेका थिए, ऊनी ट्वीड गरिएको, तर त्यहाँ कूलर संस्करणहरू छन्, ग्रीष्म forतुमा कपासले बनेको।
इटाली राम्रो पास्ता बिना इटाली हुने छैन, त्यसैले धेरै राम्रो किनमेल विकल्प छ सुक्खा पास्ता किन्नुहोस् जुन यातायात गर्न सजिलो छ र उपहारको रूपमा दिन्छ। त्यहाँ धेरै राम्रो ब्राण्ड छ, नि: शुल्क टेरa, जुन स्पष्ट रूपमा क्षेत्रहरूबाट आएको छ जुन स्थानीय समुदायहरूको पक्षमा माफियाको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र गरिएको छ।
अघिल्लो सेक्सनमा हामीले कुरा गर्यौं वाइनरी वा सानो वाइनरीमा वाइन किन्नुहोस्। यो लायक छ, यो ज्ञात गरौं कि सिसिली कम्तिमा १ 1500०० ईसापूर्वदेखि मदिरा बनाइरहेको छ त्यसैले यसलाई आफैं उत्तम बनाउने र सबै भन्दा राम्रो प्रस्ताव गर्ने समय भएको छ।
त्यहाँ टापुमा २ wine रक्सी उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू छन्, तर यसका साथ सबै भन्दा राम्रो प्रख्यात प्रजातिहरू छन् सिराह र मार्साला। कम से कम ज्ञात तर सायद यही कारणले गर्दा राम्रो उपहार हो नीरो डी'अभोला र एटना रोसो। त्यहाँ टास्का डि अमानिता वा साना व्यक्तिहरू जस्तै ठूला उत्पादकहरू छन्, जस्तै सीओएस, जसले प्राकृतिक र जैविक मदिरा बनाउँछ।
र एक मद्यको लागि भन्दा राम्रो साथी के हो चकलेटको टुक्रा? तपाई गर्मी को बीचमा सिसिली जानुहोस् भने केही फरक पर्दैन। त्यहाँ चकलेटको एक विशेष शैली छ जुन पग्लँदैन: el मोनिका शैली बारमा बेचियो। यसको एजेटेक जरा समुद्री तर्फबाट छ, र कोकोआ सिमी र चिनीले बनेको छ, सबै टाँस्न र मौसमी वा सिट्रस, वा दालचीनी वा कफीको साथ। तिनीहरू धेरै पातलो कागज र केटा संग लपेटिएका छन्, तपाईं एक सुपर उपहार छ।
अन्ततः, सिसिलीमा त्यहाँ धेरै पेस्ट्री पसलहरू पनि छन्, मार्जिपनको साथ धेरै चीजहरू, तर यसले नींबू, चेरी र नाशपातीको रूपमा लिन्छ। यो प्रसिद्ध को बारे मा छ मार्टोराना फलहरू, साँचो मूर्तिकलाहरू, यति धेरै कि तिनीहरू वास्तविक फलहरू जस्तै देखिन्छन्। र तिनीहरूले केवल फल मात्र होइन तर स्यान्डविच पनि बनाउँछन् जुन वास्तविक चीज जस्तो देखिन्छ। सबै चिनो लगाएर मामीलामा बेर्छन्।
मलाई केहि पनि नभन्नुहोस्, अहिले तपाई सिसिली भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » सिसिलीमा किनमेल गर्दै